Carpet Cleaner (4) Factory - China Carpet Cleaner (4) mpanamboatra, mpamatsy
Fanadiovana karipetra telo-iray - DTJ3A / DTJ4A (Rano mangatsiaka sy mafana)
Ny milina fanadiovana karipetra telo-iray-iray dia manaparitaka ilay mpanadio karipetra ambany-rano sy rano eo ambonin'ilay karipetra amin'ny alàlan'ny motera famafazana rano sy ny nozera mpankafy zavona. Mandritra izany fotoana izany, ny motera borosy dia manosika ilay borosy mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, mandalo ny loto amin'ny foton'ny karipetra amin'ny alàlan'ny detergent Dissolve, manadio azy io, miborosy karipetra amin'ny borosy roller ary avy eo mitsoka ny maloto. amin'ny alàlan'ny motera suction mahery vaika.
LC andiany Carpet cleaner ho toy ny milina azo ampiasaina hanandramana sy hando madio, ary azo ampiasaina amin'ny fanadiovana karipetra. Rehefa manadio karipetra, manaparitaka, manasa, ary manamaina ny fizarana 3 raha vita amin'ny fotoana iray izay manadio ny karipetra mihitsy. Ny famolavolana vatana dia vaovao sy lamaody, miaraka amin'ny fampiasana mora sy mora, indrindra mety amin'ny lalantsara, ny efitrano fihaonambe, trano fisakafoanana sns toerana hanadiovana karipetra.
Ny masinina dia manana kojakoja feno fanarian-tsolika feno, izay mety ho mando sy maina amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo faritra hafa.
Milina fitrandrahana karipetra –DTJ1A / DTJ1AR (Rano mangatsiaka sy mafana)
Endri-javatra Manafatra motera, fiantohana kalitao. Ao anaty fitoeran-drano dia ampitomboy ny efijery sivana tsy manentsina. Fantsom-pifoka 7.5m ivelany sy fitrohana rano, afaka manadio ao anatin'ny 7.5 metatra. Ny mpitsentsitra ny kofehy (tsy voatery) multifunctional amin'ny milina iray, tena mety, tsy mila manala ny lambam-baravarana na ny fonony amin'ny fanasana, manasa amin'ny zavona ary 80% maina amin'ny fotoana fohy. DTJ1AR dia karazana rano mangatsiaka sy mafana. Data data Item DTJ1A TOSIKARATRA / Frequency 220V-240V / 50Hz Herinaratra 3230W ankehitriny ...
Fanadio amin'ny sofa ao anaty iray-SC730
Ny sezà no karazana fanaka fahita indrindra ao amin'ny trano iray, ary io koa no ampiasaina matetika indrindra. Izany dia mitarika azy io ho mora tasy ary mitaky fanadiovana matetika ary tsy mandriatra ny seza.